Guriyeynta Shaandhada Bacaha, Markabka Shaandheynta Bacaha, Boorsada Dareeraha Dareeraha - Filtration Precision
Sax Filtration, waxaa la aasaasay 2010, oo ka kooban injineero xirfadlayaal sare ah, shaqaalaha maamulka sare iyo shaqaale aad u fiican oo leh in ka badan 18 sano oo waayo -aragnimo ah soo -saarka, talada iyo iibinta alaabta sifeynta dareeraha warshadaha iyo codsiyada la xiriira.
Waxaan kugula talineynaa, soo saareynaa oo siinnaa weelka shaandhada bacda dareeraha warshadaha, weelka shaandhaynta kartridda, cadaadiyaha, nidaamka shaandhaynta is -nadiifinta, bacda shaandhaynta, kartridda shaandhaynta, iwm, si loogu sifeeyo biyaha dhulka, biyaha hawsha, biyaha dushiisa, biyaha qashinka, biyaha DI ee semiconductors & warshadaha elektiroonigga ah, dareerayaasha kiimikada iyo caafimaadka, saliidda & gaaska, cuntada & cabitaanka, dawooyinka, xabagta, rinjiga, khad iyo codsiyada kale ee warshadaha.
Nala soo xiriir si aad u hesho badeecooyin badan
Sax Filtration (Shanghai) Co., Ltd.
Si loo hubiyo tayo iyo adeeg wanaagsan, waxaan diiradda saareynay habka wax soo saarka. Waxaan helnay ammaan sare oo lamaane ...
Weelka shaandhada shandadda, weelka shaandhaynta kartridda, cadaadiyaha, nidaamka shaandhaynta is -nadiifinta, bacda shaandhada dareeraha warshadaha, kartirka shaandhaynta, iwm, oo si weyn loogu isticmaalo elektiroonigga ...
Waxaan awoodnaa inaan sidoo kale ku siinno shaybaarro kharash la'aan ah si loo daboolo baahiyahaaga. Dadaallada ugu fiican ayaa la soo saari doonaa si ay kuu siiyaan adeegga iyo xalka ugu fiican ...
Xogtii ugu dambeysay
Codsiga iyo astaamaha shaandhaynta laba -geesoodka ah
Shaandhaynta duplex ayaa sidoo kale loo yaqaan shaandhaynta beddelka duplex. Waxay ka samaysan tahay laba shaandheeye oo birta ka samaysan oo siman. Waxay leedahay faa'iidooyin badan, sida sheeko-dhismeed iyo qaab-dhismeed macquul ah, wax-qabad shaabad leh oo wanaagsan, awoodda wareegga oo xoog leh, hawlgal fudud, iwm. Waa qalab shaandheyn ujeeddo badan leh oo leh wi ...
Markay noqoto cagaar, dadka badankiisu waxay ka fikiraan mawduucyo cad sida dabeecadda iyo ilaalinta deegaanka. Cagaarku wuxuu macnaha nolosha ku leeyahay dhaqanka Shiinaha, sidoo kale wuxuu astaan ​​u yahay dheelitirka deegaanka deegaanka. Si kastaba ha noqotee, horumarka joogtada ah ee warshadaha, cagaarka ayaa hoos u dhacaya heer sare ...
Farqiga u dhexeeya sifeynta dusha iyo sifeynta qoto dheer
Qalabka shaashadda waxaa inta badan loo adeegsadaa sifeynta dushiisa oo wax la dareemay ayaa loo adeegsadaa sifeynta qoto dheer. Kala duwanaanshuhu waa sida soo socota: 1. Maaddada shaashadda (nylon monofilament, monofilament biraha) waxay si toos ah u dhexgashaa wasakhda ku jirta sifeynta dusha maaddada. Faa'iidooyinka ...